UDI: 79% dadka soomaaliya ka yimid ee looga soo jawaabay codsigooda magangalyada, waxay heleen diidmo - NorSom News
UDI: 79% dadka soomaaliya ka yimid ee looga soo jawaabay codsigooda magangalyada, waxay heleen diidmo
Laanta socdaalka iyo agaasinka soo galootiga ee UDI ayaa sheegtay in 79% dadka ka yimid Soomaaliya ee codsigooda magangalyada looga soo jawaabay sanadkan aan kujirno ee 2016, ay heleen diidmo(negativ). Sidoo kale dad tiro ahaan gaaraya 140 qof oo soomaali ah, da-dooduna ay ka weyntahay 18 sano, ayaa wali jawaab ka sugaya UDI-da. Waxay isugu jiraan 55 qof oo aan wali interviewga ama waraysi marin, iyo 85 interviewga maray oo jawaab sugayo. Dadka sugaya in interviewga maraan ayaa waxaa ku jiro dad qaarkood 10 bilood iyo inka badan sugayay interviewga, oo aan waraysi laga qaadin.
Dadka magangalyo doonka ah ee ka yimid wadamada Ciraaq, Soomaaliya iyo Afgaanistaan ayaana ugu badan dadka helay diidmo ama negativ. Dhowr sano kahor, sadexdan wadan waxay ahaayeen dadka ugu badan ee magangalyo ka hela wadanka Norwey, balse hada waxay u muuqataa in dadka ka yimid Suuriya iyo Ereteriya ay yihiin dadka ugu badan ee magangalyo laga siiyo Norwey.
Warqad qoraal ah oo af soomaali ku qoran oo ay UDI-du shalay(30-juni) soo dhigtay bogeeda rasmiga ah ee internetka ayay ka codsatay inay dadka magangalyo doonka ah ee aan wali loosoo jawaabin, ay u dulqaatan waqtiga dheer ee laga yaabo inay qaadato kasoo jawaabida codsigooda.
Xigasho: UDI.NO Halkan ka akhri warka qoraalka ah oo af soomaali ku qoran
Mahad gaar ah: Abdisalam Mahamed oo nala wadaagay linkiga.
Previous articleWar deg-deg: Malik Yusuf oo laga cafiyay dilkii uu gaystay 15 sano kahor.
Next articleWar xaqiiq ah: Soomaali si khasab ah Norwey looga tarxiilay oo Muqdisho laga dajiyay